चिली लेखकहरू र उनीहरूको योगदान विश्वव्यापी अक्षरहरू वर्तमान साहित्य
समकालीन चिली लेखकहरू
जुआन अर्टिज | | जीवनी, लेखकहरू, साहित्यको इतिहास
गेब्रिएला मिस्त्रालको कवितामा अविवाहित।
चिलीका थुप्रै समकालीन लेखकहरूले विश्व साहित्यमा अमूल्य छाप छोडे। पछिल्ला दुई शताब्दीहरूमा, यो ल्याटिन अमेरिकी देशले महान् लेखकहरूको जन्म देखेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च मान्यता प्राप्त। उनीहरूमध्ये धेरैले नोबेल पुरस्कार जस्ता महत्वपूर्ण पुरस्कारहरू जितेका छन् जुन गाब्रिएला मिस्त्राल र पाब्लो नेरुदाले पाएको सम्मान पाएका थिए।
बिभिन्न साहित्य विधाहरू मार्फत, यी लेखकहरूले विश्वभरि लाखौं पाठकहरूलाई मोहित गर्नका लागि व्यवस्थित गरेका छन्। जस्तै काम गर्दछ: जंगली जासूसहरू (रोबर्टो बोलाओ) र बीस प्रेम कविता र एक निराश गीत (पाब्लो नेरुदा) तिनीहरू केवल महान् विरासतको भण्डार मात्र हुन्। अर्को, सबैभन्दा ठूलो विश्वव्यापी प्रभावका साथ चिलीका लेखकहरू के मानिन्छ भन्ने अंश देखाइनेछ।
1 गाब्रिएला मिस्त्राल
2 पाब्लो नेरुडा
3 रोबर्टो बोलाओ
4 अलेजेन्ड्रा कोस्टमाग्ना
5 अल्बर्टो फुगुएट
लुसिला डे मारिया डेल परपेटुओ सॉक्रो गोडोय अल्कायागाको जन्म अप्रिल,, १7 1889 on मा भिकुआ (एल्क्वी प्रान्त, चिली) सहरमा भएको थियो। उनी एक नम्र परिवारबाट आएका थिए, स्पेनी र बास्क कुलको साथ। उसको बाल्यावस्था एल्की प्रान्तका विभिन्न स्थानहरूमा बित्योयद्यपि यो मोन्टेग्राडे थियो कि ऊ आफ्नो गृहनगर मान्दछ।
पेशागत अध्ययन नगरेको भए पनि १ 1904 ०। पछि उनले शिक्षकको रूपमा काम गरे, पहिले एस्केला डे ला कम्पेसा बाजा, त्यसपछि ला क्यान्टेरा र लस सेरिटोसमा।. १ 1910 १० मा उनको ज्ञान र अनुभवहरू स्यान्टियागोको सामान्य स्कूल नम्बर १ द्वारा मान्य भयो, जहाँ उनले राज्य प्राध्यापकको उपाधि प्राप्त गरे।
आफ्नो शिक्षण कामको समानता, उनले अखबारका लागि लेखे Coquimbo र भित्र एल्कीको आवाज Vicuña को। १ 1908 ०। सम्म उनले छद्म नाम अपनाए गाब्रिएला मिस्त्राल, "विगत" कवितामा पहिलो पटक प्रयोग गरियो. उनको पहिलो महत्त्वपूर्ण मान्यता आयो मृत्युको Sonnets, जससँग चिली लेखकले पुष्प खेलहरूको पुरस्कार पाए (१ 1914 १XNUMX)।
यसको पथमा, मिस्टरलले सयौं कविताहरू सिर्जना गरे, विभिन्न संकलनहरूमा सन्निहित। यसमा समावेश छन्: उजाड (1922), टाला (1938) र लागर (1954)। त्यस्तै गरी लेखकलाई महत्वपूर्ण पुरस्कारहरू पनि दिइन्थ्यो, जस्तै: साहित्यका लागि नोबेल पुरस्कार (१ 1945 1951) र चिली साहित्यको राष्ट्रिय पुरस्कार (१ 10 1957१)। मिस्त्राल पैनक्रिएटिक क्यान्सरको न्यूयोर्कमा जनवरी १०, १ XNUMX .XNUMX मा निधन भयो।
रिकार्डो एलिसर नेफ्ताले रेस बासोआल्टो १२ जुलाई, १ 12 ०। मा यस संसारमा आइपुगे। उनको गृहनगर चिलीको माउले क्षेत्रको पारल हो। उनी होसे डेल कारमेन रेएस मोरालेस र रोजा नेफ्ताल् बासोआल्टो ओपाजोका छोरा थिए। कविलाई जन्म दिए पछि एक महिना उनको आमाको क्षयरोगको कारण मृत्यु भयो। पाब्लो नेरुडा "जसरी उसले पछि आफूलाई बोलाउँदछ- उहाँ टेमुकोमा बाल्यावस्थादेखि नै बाल्यावस्थासम्म नै बस्नुभयो। त्यो शहर मा उनले आफ्नो पहिलो अध्ययन गरे, र यो पछि उनका धेरै कवितात्मक कार्यहरूका लागि प्रेरणा हो।
तपाईंको पहिलो लेख, उत्साह र लगनशीलता (१ 1917 १XNUMX), अखबारमा प्रकाशित भयो टेमुकोको बिहान। दुई वर्षपश्चात, उनले कवि गाब्रिएला मिस्त्राललाई भेटे जसले उहाँलाई पढ्नको लागि परिचय दिएका थिए र उनलाई प्रसिद्ध रूसी लेखकहरूको रचनाले आफूलाई पोषण दिन प्रोत्साहित गरे। १ 1921 २१ पछि उनले पाब्लो नेरुदाको रूपमा आफ्नो कामहरूमा हस्ताक्षर गरे, यद्यपि यो १ 1946 XNUMX सम्ममा थिएन जब यो उसको कानुनी नामको रूपमा घोषित भयो।
१ 1924 २XNUMX मा उनले कविताहरूको स published्ग्रह प्रकाशित गरे जसले उनलाई प्रख्यात बनायो: बीस प्रेम कविता र एक निराश गीत। त्यहा बाट, उनले alive० भन्दा बढी कार्यहरू प्रस्तुत गरे जब उहाँ जीवित थिए र २० मरणोत्तर कामहरू गर्नुभयो। उनको क्यारियरमा नेरुदालाई धेरै पटक सम्मानित गरियो, ती मध्ये निम्न लिखित अडान: साहित्यको लागि चिलीको राष्ट्रिय पुरस्कार (१ 1945 1966), लेनिन शान्ति पुरस्कार (१ 1971 XNUMX) र साहित्यका लागि नोबेल पुरस्कार (१ XNUMX .१)।
पाब्लो नेरुडा द्वारा उद्धृत।
नेरुदाको तीन पटक बिहे भयो। उनको एक मात्र छोरीको पहिलो विवाह माल्भा मारिना त्रिनिडाडबाट भएको थियो, जो केवल years वर्षको उमेरमा हाइड्रोसेफ्लसका कारण मर्नुभयो। पाब्लो नेरुदाको जीवनका अन्तिम दिनहरू स्यान्टियागोमा बिताए जहाँ सेप्टेम्बर २ 23, १ 1973 .XNUMX मा उनको मृत्यु भयो। उन्नत प्रोस्टेट क्यान्सरबाट।
रोबर्टो बोलाओको जन्म अप्रिल २ 28, १ 1953 .XNUMX मा स्यान्टियागो डे चिलीमा भएको थियो। उसको बाल्यकाल वालपरासो, भिआला डेल मार र लस एन्जेलिस शहरको बीचमा बित्यो जहाँ उनले आफ्नो प्राथमिक शिक्षा पूरा गरे। १ At मा उनी आफ्नो परिवार संग मेक्सिको सरे। एज़्टेक देशमा उनले आफ्नो माध्यमिक अध्ययन जारी राखे, जुन उसले एक बर्ष पछि छोडेको थियो आफैलाई विशेष रूपमा पढ्न र लेख्नको लागि समर्पित गर्न।
मेक्सिको सिटी मा, बोलाओले कवि मारियो स्यान्टियागो र अन्य युवा लेखकहरूसित भेट गरे। समूहले धेरै साहित्यिक चासोहरू साझा गर्नुभयो, थोरै पछि तिनीहरू धेरै नजिक भए। यस मित्रताबाट इन्फ्ररेलवादको काव्य आन्दोलनको जन्म भएको थियो, १ 1975 XNUMX मा स्थापित। एक वर्ष पछि, रोबर्टोले यो काम प्रकाशित गरे पुनर्जन्म प्रेम। कविताको स This्ग्रह ती of मध्ये पहिलो थियो जुन उनले आफ्नो क्यारियरमा प्रस्तुत गरे, दुईवटा मरणोत्तर संस्करण। उहाको किताबमा समाबेस; उसको किताबमा समाबेस: रोमान्टिक कुकुरहरू (1993), Tres (2000) र अज्ञात विश्वविद्यालय (2007)।
उनको पहिलो पुस्तक, मोरिसनका शिष्यबाट जोइस फ्यानलाई सल्लाह (१ 1984। XNUMX) लाई साहित्यिक क्षेत्र पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो. यद्यपि आफ्नो लामो क्यारियरको बाबजुद पनि यस लेखकलाई प्रख्यात बनाउने कार्य उनको छैटौं प्रकाशन होः जंगली जासूसहरू (१ 1998 1998।) यस उपन्यासले उनलाई हेराल्डे डे नोभेला पुरस्कार (१ XNUMX XNUMX)) को विजेता बनायो। -यसलाई प्राप्त गर्न पहिलो चिलीली- र रामुलो ग्यालगिओस पुरस्कार (१ 1999 XNUMX।)।
बार्सिलोना (स्पेन) मा 50० वर्षको उमेरमा रोबर्टो बोलाओको जुलाई १ for, २००ñ मा लामो समयसम्म कलेजो दुख्ने क्रममा मृत्यु भयो। चिलीका लेखकले धेरै अधूरे पुस्तकहरू छोडे, जुन उनको मृत्युको बर्ष पछि प्रकाशित भयो। उपन्यास, संकलनबाट एक मास्टरपिस आयो 2666 (२००)), जसको साथ उनले महत्वपूर्ण पुरस्कारहरू जिते जस्तै: सलाम्बा, सिउदाद डे बार्सिलोना र अल्ताजोर.
एलेजान्ड्रा कोस्टमाग्ना क्रिभेल मार्च २,, १ 23 .० मा सान्टियागो डे चिलीमा विश्व आए। किनभने उहाँ थोरै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई लेख्न मनपर्थ्यो, तर यो किशोरावस्थामा मात्र होईन कि उनले यस कामलाई अधिक गम्भीरताका साथ लिए। उनका शिक्षक गुइलर्मो गोमेजसँग यस आवेगको साथ धेरै कुरा थियो। आफ्नो जीवनको त्यो चरणमा उनले मिस्त्राल, नेरुदा, शेक्सपियर र निकानोर पारा पढ्न थाले; सबै उनको लागि ठूलो प्रभाव भएको छ।
कोस्टमाग्नाले डियागो पोर्टल विश्वविद्यालयमा पत्रकारिताको अध्ययन गरे। केहि समय पछि, उनले यही क्याम्पसमा साहित्यमा स्नातकोत्तर पूरा गरे। उनको क्यारियरको अवधिभर उनले साहित्यिक कार्यशालाहरू दिन समर्पण गरिसक्यो, यसका साथै उनले धेरै राष्ट्रिय पत्रिकाहरूको सम्पादक, थियेटर कमेन्टकर्ता र क्रॉनररको रूपमा पनि काम गरी।
एक लेखकको रूपमा, उनले १ 1996 XNUMX in मा उनको पहिलो काम प्रस्तुत गरे, शान्त, जसले धेरै राम्रो टिप्पणीहरू प्राप्त गर्‍यो र गेब्रिएला मिस्टरल साहित्यिक खेल पुरस्कार (१ 1996 XNUMX।) जित्यो। Costamagna सफल उपन्यासहरू प्रस्तुत गरेको छ, जस्तै: खराब रातहरू (2000), अन्तिम आगो (2005 XNUMX), र घरपालुवा जनावर (2011)। धेरै आलोचकहरूले उनका केही कामहरू तथाकथितमा समावेश गर्दछन् बाल साहित्य।
स्यान्टियागो डे चिलीले मार्च 7, १ 1964।। मा अल्बर्टो फिलिप फ्युगेट डे गोयनेचेको जन्म देखे। उसको बाल्यकाल संयुक्त राज्यमा बित्यो र १ 1975 XNUMX सम्म उहाँ आफ्नो जन्मभूमि फर्कनुभएन। भाषा द्वारा सीमित, भविष्य लेखकले आफ्नो मातृभाषाको साथ आफूलाई परिचित गर्न स्पेनिश भाषाका पुस्तकहरू पढ्न शुरू गरे। कि स्वीकार स्टेशनरी मार्सेला पाजले उनीमाथि ठूलो प्रभाव पारे जुन उनको पहिलो पुस्तकमा झल्किन्छ।
उनले चिली विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरे। उनको पहिलो छनोट समाजशास्त्रमा क्यारियर थियो, जुन उनले एक बर्ष अध्ययन गरे, तथापि, त्यसपछि उनले पत्रकारितामा परिवर्तन गरे, जहाँबाट उनी स्नातक भए र उनको चाहना मध्ये एक हो। लेखकको रूपमा कामका अतिरिक्त उनले स्तम्भकार, उपन्यासकार, पटकथा लेखकको रूपमा मान्यता प्राप्त करियर बनाएका छन्, संगीत र फिल्म आलोचक। यो अधिक वास्तविक र शहरी साहित्य मा शर्त को लागी, समकालीन लेखकहरु मा यसको प्रभाव को कारण मान्यता प्राप्त छ।
१ 1990 XNUMX ० मा उनले आफ्नो पहिलो कथा प्रस्तुत गरे, ओभरडोज, जसको साथ उनले सान्तियागो साहित्यको लागि नगरपालिका पुरस्कार जीते. अर्को वर्ष उनले उपन्यास प्रकाशित गरे जसले उनलाई सफलतामा पुर्‍यायो: नराम्रो छाल। उनको काम पनि हाइलाइट गर्दछ: रातो मसी, २००० मा सिनेमाको लागि अनुकूलित पुस्तक। तीन बर्ष पछि, उनले अर्ध आत्मकथा भने मेरो जीवनको फिल्महरू, उनका भर्खरका उपन्यासहरू हुन्: गैर कल्पना (2015) र पसिना (2016)।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » जीवनी » समकालीन चिली लेखकहरू